Norway: Nin eygiisa dilay oo maxkamad ay xukuntay. - NorSom News
Norway: Nin eygiisa dilay oo maxkamad ay xukuntay.
Sida uu qoray NRK, maxkamada Glåmdal ee gobolka Hedmark, ayaa xukuntay nin lagu eedeeyay inuu eygiisa ku dilay faas(masaar).
Xeer ilaalinta ayaa ninkan ku eedeysay inuu eygiisa oo xiligaas xanuunsanaa, uu u dilay qaab kasoo horjeedo xeerka xanaanada xoolaha Norway. Kadib markii uu dilka u adeegsaday faas, isaga oo afka faaska madaxa eyga kala dhacay dhowr mar, ilaa ay naftu ka baxeysay.
Ninkan ayaa maxkamadu ku xukuntay 75 maalmood oo xabsi ay shuruudi ku xirantahay ah.
Xigasho/kilde: Avlivet egen hund med øks – dømt til fengsel.
Previous articleWasiirkii iscasilay ee Frp oo muujiyay damaca furashada xisbi cusub.
Next articleWargalin: Ka qeybgal caleemo saarka gudiga madasha dhalinyarada Norway.